Ny taona 2018, hoy izy, no nisy ny fifanarahana teo amin’ny CUA sy ny Le zoma du Tana amin’ny fampiasana ny Parvis hanaovana varotra sy fampirantiana isam-bolana. Nandritra ny herintaona sy tapany anefa dia tsy notanterahan’ity hetsika ity ny fifanarahana tamin’ ny fandoavana ny vola hofan’ny toerana. Nampahatsiahy sy niala nenina hatrany ny kaominina ary nandeha tamin’ny ambaratonga rehetra tokony hatao ny fampahatsiahivana sy ala nenina, vao nampihantona ny fifanarahana natao taminy ny fiadidiana ny tanàna. Nisy ny taratasy fanomezana fe-potoana handoavana ny vola nataon’ny CUA, nefa tsy nanaraka izany hatrany ny Le zoma du Tanà. Ny hetsika fanao isam-bolana dia mbola mitohy hatrany eo amin’ny Parvis Analakely, indrindra amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fetin’ny reny izao, hoy hatrany ny fanazavana.